Goorma ayay dawlad, qabiil, koox ama qof dagaalamaa? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray) | Hangool News
Goorma ayay dawlad, qabiil, koox ama qof dagaalamaa? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray)
Dagaal mar hore la dhex dhigay beelo Hargaysa wada daga. Dagaalkan ayaan arkay dad badan oo odayaal ah oo ka sheekaynaya, xiisadan la kiciyay awgeed, horta dagaalkan wuxuu ah dagaal laga dhex riday beelo Hargays wada daga oo ceeshaw milix ahaa, dagaalkaas runtii collaad xun buu dhex dhigay beelahaas, markaa waxaan isku dayay bal waxa sababay dagaalkan iyo ahdaafta laga lahaa in aan ogaado, tani waa baadhistayda waxaana wanaagsan caruureheena inaynu taariikh uga tagno si aan dhibtan oo kale mararkale u dhicin.
Horta dagaalku waa wax nolosha bani’aadamka la xidhiidha, marwalbana dhaca, ama xaq ha udhaco ama xaq daro ama munaafaqad ha u dhaco eh.
Hadaba had iyo goor dagaalku wuxu ka dhex dhacaa dawlado, ama qabaa’il, ama kooxo, ama laba qof.
Way jiraan dagaalo dano laga leeyahay oo la abaabulo oo munaafaqad ku salaysan, sidii dagaalkan beelo wadadaga Hargaysa laga dhexriday oo odayaal xul ah lagu laayay, markii aan dagaalkaa u kuur galay, waxaan ogaaday, kuwa laynagu dhexbeeray iyo shabakadooda ayaa ka dambeeyay, hadafkuna wuxuu ahaa in odayaashaa xulka ah la laayo.
Sababta odayaasha loo laynayayna waxay ahayd, markii waxan is huwan, shabakadan iyo kuwan laynagu dhexbeeray ay dadkii godkii lixdankii ku soo rideen, si aan looga soo saarin godkaa.
Odayaashana waxay waqtigaa ahaayeen indhihii umada, waana kuwii ka soo saari lahaa godkaa dadkooda lagu riday, markaa si aanay taasi u dhicin ayaa qorshahan loo sameeyay loona laayay, iyada oo shaadh qabiil loo xidhay.
way dhacaan dagaalo caynkaas ah, laakiin inta badan sidaa uma dhacaan.
Hadaba hadii aad aragto dawlad, qabiil, koox ama qof dagaalamaya waa cid laga guulaystay, waayo? awood inay dawalad, qabiil, koox ama qof isticmaalo, waa halkii ugu dambaysay, miyaydaan arag quraanka iyo duqaada, marka ay ambiyadu ka badiso xujooyinka ayay awood adeegsadaan.
Maalin ayaan bus saarnaa markaas ayaa kii busku wuxu saaray hees markaas ayaan ku idhi waar naga bakhtii, mid i ag fadhiyay oo xoog isbidaayay ayaa yidhi waar noo daa heesta, inta aan u jawaabay ayaan ku idhi, bal kawaran walashaa oo heesaysa maad dhagaysan lahayd, intu cadhooday ayuu feed soo duubtay, oday na dhinac fadhiyay oo isku kaaya dhagaysanayay, ayaa ku yidhi waar ha cadhoon, su’aal ayuu ku waydiiyay eh ka jawaab, markaasuu halkii ku qaboobay.
Hadaba hadal iyo guntii,hadii aad aragto cid dagaalamysa, waa cid laga guulaystay, haba burburiyaan cidii ka soo horjeeday eh.
Imika waxaa ka dhigan reer galbeedkan islaamkii weerarka ku soo qaaday, waa markii fikriyan laga guulaystay, ayay awood miciin bideen.